cusmaan – Page 20 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
cusmaan	 Mar 10, 2019 2
Jamaacada Xurraasu-diin oo kamid ah jamaacaadka Jihaadiga ee ka dagaallama wadanka Suuriya ayaa soo saartay bayaan ay ku hambalyeyneyso weeraradii ka kala dhacay saldhiga Shawaarib ee dalka Afqaanistaan iyo kii hotel Makka Al-mukarrama…
Sawirro+ Khudbado: 40 Hogaamiye Qabiil oo Bayco La Galay Xarakada Al-Shabaab.
cusmaan	 Mar 9, 2019 0
Maktabka Siyaasadda iyo Wilaayaadka ee Xarakada Al-Shabaab ayaa dowro u qabtay 40 Indheer garad ah oo isugu jira Ugaasyo, Malaaqyo, Salaadiin iyo Nabadoono ka kala socday qabaa’ilka Soomaaliyeed. Dowrada oo socotay muddo bil ah ayaa…
Iyadoo weli xiisada u dhexeysa wadamada Hindiya iyo Pakistaan ay sideeda tahay, walow degnaansho aan sidaas u badneyn la dareemayo, ayaa hadana waxaa xuduud beenaadka Hindiya iyo Pakistaan ku burburtay diyaarad dagaal. Diyaaraddan…
Wargeys kasoo baxa dalka Faransiiska ayaa qoray warbixin dheer oo uu kaga hadlayo xaaladda Afqaanistaan iyo isbedelka la filayo in dalkaas uu lugaha la galo. Warbixin ciwaan looga dhigay “Kabul waxay isku diyaarineysaa soo…
Madaxweynaha dalka Uganda baaderiga lagu magacaabo Yuweri Museveni ayaa gef cad oo aan geed loogu soo gamban wuxuu u geystay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. Museveni oo ka hor hadlayay saraakiil ka tirsan…
Difaacyada Shisheeyaha iyo kuwa dowladda ee Buula-mareer Oo la weeraray.
Habeenkii xalay, waxaa magaalada Buula-mareer ee gobolka Shabeellaha-hoose ka dhacay dagaallo xoogan oo lagu qaaday dhufeysyada ciidamada Shisheeyaha iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin magaalada. Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta…
cusmaan	 Mar 8, 2019 0
Barnaamijka Dhacdooyinka dunida islaamka waa todobaadle maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato akhbaaraadkii ugu waaweynaa caalamka. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka…
Dhagayso Barnaamijka Diiradda Jimcaha.
Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo todobaadle ah waxaa maanta lagu falanqeeyay Dowrka Odoyaasha dhaqanka ay ku leeyihiin wacyigelinta bulshada. Barnaamijka waxaa ka qeybgalay Odayaal caan ku ah Soomaaliya. Halkan ka dhagayso Barnaamijka…
DEG-DEG: Wasiirkii Dastuurka ee dowladda Oo Geeriyooday.
cusmaan	 Mar 8, 2019 2
Waxaa goordhow magaalada Abuu Dubai ee isku taga Imaaraadka Carabta ku geeriyooday wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo Cabdi-Raxmaan Xoosh Jibirii. Wasiirka ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala…
Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo Ee Radio Al-furqaan.
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dhageyso Warka Subaxnimo ee Radio Alfurqaan. Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 08 03 2019